Muqdisho: Askar iyo Saraakiil Ku Dhintay Iska Hor Imaadyo Maanta Dhexmaray Ciidamo Ka Wada Tirsan Kuwa Dawladda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Muqdisho: Askar iyo Saraakiil Ku Dhintay Iska Hor Imaadyo Maanta Dhexmaray Ciidamo Ka Wada Tirsan Kuwa Dawladda
Ugu yaraan shan askari oo ay ku jiraan saraakiil ayaa maanta ku dhintay dhawr iska hor imaad oo kala duwan oo ka dhacay degmooyin ka tirsan magaaladda Muqdisho, iska hor imaadyadaas oo dhexmaray ciidamo ka wada tirsan kuwa dawladda Soomaaliya.
Iska hor imaadka ugu khasaaraha badnaa ayaa maanta gelinkii danbe ka dhacay is-goyska Tiyaatarka qaranka ee magaaladda Muqdisho. Halkaasoo ciidamo ka tirsan milateriga ilaaladda madaxtooyadda ay is-taajiyeen gaadhi nooca Cabdi Bilaha ah oo ay wateen ciidanka loo yaqaano Xasilinta amniga caasimadda Muqdisho.
Ciidamadda ilaaladda madaxtooyadda ayaa la sheegay in ay ku wargeliyeen kuwa xasilinta Muqdisho in wadaddu ay xidhan tahay oo aan la ogolayn in gaadiidku marro, hase yeeshee ciidamadda Xasilinta Muqdisho ayaa isku deyay in ay jidkaas maraan. Is-rasaasayn halkaa ku dhexmartay labadda ciidan waxaana la sheegay in goobtaas at ku dhineen afar askari oo uu ku jirro nin sarkaal ah, halka tirro kale-na ay ku dhaawacmeen.
Sidoo kale Barqanimadii saaka ayaa isla magaaladda Muqdisho waxay is-rasaasayn ku dhexmartay agagaarka meesha loo yaqaano Ceel-gaabta, Ciidamo ka tirsan kuwa Xasilinta Muqdisho oo doonayay in ay jidkaas maraan, balse ciidamadda ilaaladda madaxtooyadda oo meeshaas joogay ay u sheegeen in jidku xidhan yahay, iyadoo arrintaa ay ka diideen ciidanka Xasilinta oo ku adkaystay in ay maraan.
Daqiiqado yar uun kadib markii uu halkaas ka gudbay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, xili uu madaxtooyadda ka soo baxayay isagoo u socday dugsiga tababarka ciidamadda Iskuul Boolisiye. Halkaas oo uu kaga qayb gelayay munaasabad loogu tallo-galay in madaxda dawladda iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladu ay isku arkaan.
Wararka ayaa tibaaxaya in kadib amarka iyo amar-diidadda dhex martay labadda ciidan in is-rasaasayn ay ka dhacday goobtaas, waxaana is-rasaasayntaas ku dhintay askari ka tirsanaa ciidanka ilaaladda madaxtooyadda, halka laba kale-na ay ku dhaawacmeen. Sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya.
Geesta kale degmadda Wadajir ee isla magaaladda Muqdisho waxaa maanta ka dhacay iska-hor-imaad kale oo u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa Xasilinta amniga Muqdisho iyo dabley hubaysan, hal qof ayaa la soo weriyay in iska-hor-imaadkaas uu ku dhaawacmay.
Dhinaca kale, maanta duhurnimadii degmadda Hodan ee magaaladda Muqdisho gaar ahaana agagaarka jaamacadda Gahayr, ciidamo la sheegay in ay ka mid yihiin kuwa Xasilinta iyo kuwa dawladda ayaa iyag-na iska-hor-imaad muddo kooban socday uu ku dhexmaray. Hase yeeshee, lama soo sheegin wax khasaare ah oo iska-hor-imaadkaasi uu sababay.
Ilaa hadda ma jirto saraakiisha ciidamaddaÂ ama masuuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ka hadlay dhacdooyinka khasaarahaÂ nafeed sababay ee maanta ka dhacay Muqdisho. Inkastoo la sheegay in ay jiraan saraakiil ka tirsan ciidamadda oo ku guddo jira baadhitaankaÂ arrimahaas.
Ma aha markii u horaysay oo iska hor imaad u dhexeeya ciidamadda dawladda Soomaaliya uu ka dhaco magaaladda Muqdisho, laakiin dhacdooyinka maanta ayaa muuqanaya in uu jirro is-faham waa u dhexeeya ciidamadda oo la xidhiidha dhinaca kala amar-qaadashadda iyo sida loo marayo wadooyinka magaaladda xiliyadda ay hawl-galadu ka socdaan ama madaxda sar sare ee dawladu ay marayaan.
SDWO News Desk – Mogdisho